Kutonga kwaTrump kuronga kubvisa mamwe mauto ekudzivirira kubva kuPortland - teles relay
Kutonga kwaTrump kuronga kubvisa mamwe mauto ekudzivirira kubva kuPortland
Kutonga kwaTrump kuronga kubvisa mamwe mauto ehurumende kuPortland, Oregon, mushure memavhiki ekunetsana nevaratidziri.
Munyori wezvekuchengetedzeka kweUS Homeland, VaChad Wolf, vanoti kudhirowa kuri kuita mapurisa emuno kuchengetedza zvivakwa zvemubatanidzwa.
Gavhuna weOregon Kate Brown akati masangano emubatanidzwa achatanga kusiya guta guru renyika kutanga neChina.
Portland yakatenderwa nemazuva makumi matanhatu nematanhatu ekuratidzira.
Vakuru vakuru vehurumende vakati chii?
Mukutaura kwake, Munyori weAmerica weHomeland Security haana kuisa chero nguva yekubvisa.
Asi akati iye pamwe negavhuna "vabvumirana chirongwa chekudyidzana kuti chipedze basa remhirizhonga muPortland yakanangana nemidziyo yemubatanidzwa nevashandi vemitemo."
"Ichi chirongwa chinosanganisira chakasimba Oregon State Mapurisa kuvapo kwedhorobha rePortland. "
Akawedzera kuti "mutemo nehurumende zvemuno zvichatanga kuchengetedza zvivakwa pamwe nemigwagwa, kunyanya nzvimbo dzakapoteredzwa nemubatanidzwa, dzakarwiswa kamwe kamwe."
Gavhuna akatenda neChitatu: "Vakaita sechiuto uye vakaunza chisimba. Kutanga mangwana, maCustoms ese uye Border Dziviriro uye maICE maoffices vachange vachibva kutown Portland. "
Asi akawedzera kuti mahurumende emubatanidzwa kubva kuUS Marshals Service neFederal Protential Service vacharamba vari mudare, mavanowanzogara.
Mushure mekuzivisa izvi, VaTrump, vekuRepublican, vakataura kukunda kuburikidza nekutenda: "Dai hurumende yemubatanidzwa pamwe nemashandisirwo emutemo ayo akasimba (Homeland) vaisaenda kuPortland svondo rapfuura, kune angadai asina Portland.
“Aizopiswa opfurwa. Kana meya negavhuna vasingamise pakarepo kuparwa kwemhirizhonga nevasori, hurumende yemubatanidzwa ichaenda kunoita basa raifanirwa kuitwa nemutemo wepo! "
muzvinambiriVakuru vehurumende vakayedza kudzingira mhomho vanhu pavakatanga kuungana manheru emusi weMuvhuro
Chii chakaitika muPortland?
Vakuru vehurumende vakatumirwa ikoko musi waChikunguru 4 kuti vadzivirire zvivakwa zvehurumende zvakashatiswa mukati memavhiki vachiratidzira kusarurana uye hutsinye hwemapurisa zvichitevera kufa kwaGeorge Floyd, murume asina zvombo, kuMinneapolis, Minnesota, mu Chivabvu.
Kutamiswa kwavo kwawedzera rugare rwevagari vemo, kunyanya kana kuratidzira kwevaratidziri kubatwa mumigwagwa nevamiriri vehurumende nekumanikidzwa kupinda mumotokari dzisina mazita.
Gavhuna wePortland uye Meya Ted Wheeler, vese vari maDemocrats, vakanyunyuta kuti haana kumbobvira adaidzira kupindira kwemubatanidzwa, vachidana kuti coup yePurezidhendi gore resarudzo.
Iyo Mark O Hatfield Federal Courthouse iri pakati peguta rave nhandare yehusiku, nevabati vehurumende pamwe nevaratidziri vakakuvara mukuparara kweropa.
Sekureva oregonlive.com .
Pamwe chete nekuparara muPortland, manejimendi eTrump akatumira mauto mumagavhuna akati wandei eDemocrat akazara nehondo yepfuti: Chicago, Kansas City, uye Albuquerque.
Dhipatimendi reU.S. reJustice rakadaro neChitatu kuti ichatumirawo mauto ehurumende kune mamwe maguta matatu akatungamirwa neDemocratic - Cleveland, Detroit neMilukeukee - nekuda kwe "kuwedzera kuri kuita utsotsi nemhirizhonga, kunyanya kuuraya mudzimba."
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53589275
Kutonga kwaTrump kuronga kubvisa mamwe mauto emubatanidzwa kuPortland
United States kubvisa mauto angangosvika zviuru gumi nembiri kubva kuGermany mukufamba "kwakanaka"
Kurwisa COVID-19: CRTV TV Zvirongwa Zvakatangwa Kuti Titangezve Nekuremekedza Kuremekedzwa Kwemhinganidzo